အစိုးရ စကျမှုလကျမှုသိပ်ပံသငျတနျးကြောငျး ဖှငျ့လှဈရနျ လြာထားခွငျး | Edge.com.mm : Best Education Guide in Myanmar
အစိုးရ စကျမှုလကျမှုသိပ်ပံသငျတနျးကြောငျး ဖှငျ့လှဈရနျ လြာထားခွငျး
ပညာရေး ဝနျကွီးဌာန၊ သကျမှေးပညာနှငျ့ လကေ့ငျြ့ရေး ဦးစီးဌာနအနဖွေငျ့ မကှေးတိုငျးဒသေကွီး၊ မငျးဘူး မွို့နယျအတှငျး၌ အစိုးရ စကျမှုလကျမှုသိပ်ပံသငျတနျးကြောငျး (GTI) တဈကြောငျး ဖှငျ့လှဈနိုငျရေး လြာထားဆောငျရှကျလကျြ ရှိသညျဟု ပညာရေး ဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ဦးဝငျးမျောထှနျးက ပွညျသူ့လှတျတျော အစညျးအဝေးတှငျ ဖွကွေားခဲ့ပါတယျ။
“နညျးပညာ၊ သကျမှေးပညာနှငျ့ လကေ့ငျြ့ရေးဦးစီးဌာနအနဖွေငျ့ ကြောငျးသဈမြားဖှငျ့လှဈရာတှငျ ပထမဦးစှာ ခရိုငျမွို့ကွီးမြားတှငျ ဦးစားပေး စတငျဆောငျရှကျသှားရနျ မူဝါဒ ခမြှတျ ဆောငျရှကျလကျြ ရှိပါသဖွငျ့ ခရိုငျမွို့ကွီးဖွဈသော မငျးဘူးမွို့နယျတှငျ အစိုးရစကျမှုလကျမှုသိပ်ပံသငျတနျးကြောငျး တဈကြောငျး ဖှငျ့လှဈရနျ လြာထားပွီးဖွဈပါတယျ” ဟု ၎င်းငျးက ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
မငျးဘူး မဲဆန်ဒနယျ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးဝငျးဝငျး၏ GTI ကြောငျးဖှငျ့လှဈရေးနှငျ့ စပျလဉျြးသညျ့ မေးခှနျးအား ဖွကွေားရာတှငျ ဒုတိယဝနျကွီးက ပွောကွားခဲ့ခွငျး ဖွဈပွီး ပညာရေးဝနျကွီးဌာန၊ သကျမှေးပညာနှငျ့ လကေ့ငျြ့ရေး ဦးစီးဌာန အနဖွေငျ့ မကှေးတိုငျးဒသေကွီးတှငျ အစိုးရ စကျမှုလကျမှုသိပ်ပံ (မကှေး၊ ရနေံခြောငျး၊ ခြောကျ၊ သရကျ၊ ဂနျ့ဂေါ) တို့တှငျ A.G.T.I. ဒီပလိုမာ (၃) နှဈ သငျတနျးမြားနှငျ့ ဒသေလိုအပျခကျြနှငျ့ ကိုကျညီသော ကာလတို သကျမှေးပညာ သငျတနျးမြားကို လညျးကောငျး၊ အစိုးရ နညျးပညာအထကျတနျးကြောငျး (မကှေး၊ ပခုက်ကူ)တို့တှငျ G.T.H.S. (၂) နှဈ သငျတနျးမြားနှငျ့ ဒသေလိုအပျခကျြနှငျ့ ကိုကျညီသော ကာလတို သကျမှေးပညာ သငျတနျးမြားကို လညျးကောငျး အသီးသီး ဖှငျ့လှဈသငျကွားပေးလကျြရှိကွောငျး၊ မငျးဘူးမွို့နယျအတှငျး GTI ကြောငျး တဈကြောငျး ဖှငျ့လှဈနိုငျရနျ မငျးဘူးမွို့နယျ၊ ကြောကျတနျး ကြေးရှာအုပျစုတှငျ မွဧေရိယာ (၁၅ ဒသမ ၀၉) ဧကအား မွလှေတျ၊ မွလေပျနှငျ့ မွရေိုငျးမြား လုပျပိုငျခှငျ့ အသုံးပွုခှငျ့ရရှိရနျအတှကျ မွလှေတျ၊ မွလေပျနှငျ့ မွရေိုငျးမြား စီမံခနျ့ခှဲရေး ဗဟိုကျောမတီထံသို့ လြှောကျထားတငျပွ ဆောငျရှကျလကျြ ရှိပါကွောငျး၊ အစိုးရ စကျမှုလကျမှုသိပ်ပံ (မငျးဘူး)၏ ကြောငျးမွေ နရောအဖွဈ ရရှိပွီးပါက သကျဆိုငျ ရာ ဘဏ်ဍာရေး နှဈအလိုကျ ဘတျဂကျြ လြာထားတငျပွ ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈပါကွောငျး ၎င်းငျးက ဖွညျ့စှကျ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
Credit: Xinhua Myanmar
ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူး မြို့နယ်အတွင်း၌ အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံသင်တန်းကျောင်း (GTI) တစ်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး လျာထားဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်ဟု ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းမော်ထွန်းက ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
“နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ကျောင်းသစ်များဖွင့်လှစ်ရာတွင် ပထမဦးစွာ ခရိုင်မြို့ကြီးများတွင် ဦးစားပေး စတင်ဆောင်ရွက်သွားရန် မူဝါဒ ချမှတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသဖြင့် ခရိုင်မြို့ကြီးဖြစ်သော မင်းဘူးမြို့နယ်တွင် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံသင်တန်းကျောင်း တစ်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ရန် လျာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မင်းဘူး မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းဝင်း၏ GTI ကျောင်းဖွင့်လှစ်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား ဖြေကြားရာတွင် ဒုတိယဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန အနေဖြင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မကွေး၊ ရေနံချောင်း၊ ချောက်၊ သရက်၊ ဂန့်ဂေါ) တို့တွင် A.G.T.I. ဒီပလိုမာ (၃) နှစ် သင်တန်းများနှင့် ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော ကာလတို သက်မွေးပညာ သင်တန်းများကို လည်းကောင်း၊ အစိုးရ နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (မကွေး၊ ပခုက္ကူ)တို့တွင် G.T.H.S. (၂) နှစ် သင်တန်းများနှင့် ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော ကာလတို သက်မွေးပညာ သင်တန်းများကို လည်းကောင်း အသီးသီး ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ မင်းဘူးမြို့နယ်အတွင်း GTI ကျောင်း တစ်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် မင်းဘူးမြို့နယ်၊ ကျောက်တန်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် မြေဧရိယာ (၁၅ ဒသမ ၀၉) ဧကအား မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့် အသုံးပြုခွင့်ရရှိရန်အတွက် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီထံသို့ လျှောက်ထားတင်ပြ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ အစိုးရ စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (မင်းဘူး)၏ ကျောင်းမြေ နေရာအဖြစ် ရရှိပြီးပါက သက်ဆိုင် ရာ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အလိုက် ဘတ်ဂျက် လျာထားတင်ပြ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
News News Tips Latest Post News Read 1212 times